अन्ततः किम जोङ उनसँग झुके ट्रम्प ! उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्न तयार – Medianp
अन्ततः किम जोङ उनसँग झुके ट्रम्प ! उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्न तयार
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, फागुन ०१, २०७४०८:०२0
काठमाडौं, १ फागुन । अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्ने संकेत देखाएको छ । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिको उत्तरका उच्च अधिकारीहरुसँग प्रत्यक्ष भेट भएदेखि नै अमेरिकासित पनि वार्तामा सहभागी गराउन दक्षिण कोरियाले लगातार प्रयास गरिरहेको बताइएको छ । दक्षिण कोरियाको प्रयासपछि अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग वार्ता हुने संकेत देखाएको हो ।
मेरिकी उपराष्ट्रपति पेन्सले प्रतिबन्ध र दबाब जारी राखिरहेपनि उत्तर कोरिया वार्ताका लागि अघि सरे अमेरिकाले त्यसलाई स्विकार गर्ने बताएका छन् । केही दिन अघि मात्रै उत्तर कोरियाली नेता किमकी बहिनीले राष्ट्रपति मुनलाई हस्तलिखित पत्र दिएकी थिइन् । उत्तर कोरियाले मुनलाई प्योङयोङ भ्रमणको निम्तो समेत दिएको छ ।
अमेरिकाले पनि उत्तर कोरियासँग कूटनीतिक संलग्नता राख्न तयार रहेको पेन्सले बताए । एक पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा उनले उत्तर कोरिया अहिले इच्छुक भए अमेरिका पनि विनाशर्त वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियासँग वर्षौँदेखि वार्ता गर्ने प्रयास विफल भएको हुँदा उनीहरुले हतियार नबिसाएसम्म छलफलको कुनै अर्थ नरहने बताएका थिए ।
नेता किम र ट्रम्पबीचको विवाद पछिल्लो समय धेरै अपमानजनक र धम्कीपूर्ण बन्न पुग्दा विश्वभर चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । तर वार्ताका लागि तयार रहेपनि उत्तर कोरियाले आफ्नो हतियार निर्माण कार्य नरोक्ने बताएकाले अमेरिका लगायत सहयोगी मुलुकहरुले पनि प्रतिबन्ध र दबाब जारी राख्ने बताइएको छ ।
उता दक्षिण कोरियाले भने युद्धका समयमा उत्तरमा छुटेका परिवारलाई मिलाउनकै लागि भएपनि उत्तर कोरियासँग संलग्नता बढाइरहने बताएको छ । उत्तर कोरियाले यसमा सहमति जनाएपछि कोरियाली प्रायद्विपमा सैन्य तनाव पनि कम हुँदै जाने दक्षिण कोरियाको भनाइ छ । एजेन्सी
च्याम्पियन्स लिगः प्रिक्वाटरफाइनलका खेल आजबाट, कसको भिडन्त को सँग ?
सिंहदरबार भत्काउन फेरि सुरु भयो लबिङ
अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति मुजाद्धादीको निधन
यसरी धनि भएका थिए मुकेश अम्बानी, जान्नुहोस् धनि बन्ने सुत्रहरु
साउदी युवराज भारत आउने